Public Health in Myanmar: Cerebrovascular Accident (Stroke)
ကိုယ်အလေးချိန်တက်လို့ လေဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုရင် ထမင်းမစားဘဲ တခြား ပြောင်းစားသင့်တဲ့ အစာတွေ သိချင်ပါတယ်။
ထမင်းနဲ့ ဆီကို သိပ်ကြိုက်လို့ သူတို့ မပါရင် ဘာမှ စားမမြိန်ဘူးခင်ဗျ။ ဟင်းလဲ ဆီပါမှ ကြိုက်တာ အကျင့်ဖြစ်နေတယ်။ ထမင်းစားရင်လဲ နှစ်ပန်းကန်မောက်မောက်လောက်မှ ဝလို့ ထမင်းပုံမှန်စားတဲ့ အကျင့်ပျက်သွားအောင် တခြား ဘာတွေ ပြောင်းစားလို့ရမလဲခင်ဗျ။ ကိတ်မုန့်တွေ၊ သရေစာတွေကျတော့လဲ မြန်မာ့လျှာနဲ့ မတင်းတိမ်လို့ပါ။
ကိုအောင်ဝင်း- ဟင်းသီးဟင်းရွက် (အစိမ်း၊ အကျက်) ကိုအများဆုံးစားသင့်ပြီး ထမင်းကို ဒုတိယအများဆုံး ကျန်တာတွေကို နည်းနည်းစီသာ စားသင့်ပါတယ်။ ဆီ၊ ကိတ်မုန့်၊ သာကြား၊ အချိုရည်၊ ဘီစကွပ်မုန့် စတာတွေဟာ အပျော်စားတဲ့ အပိုစာတွေသာ ဖြစ်တယ် ဆိုလိုတာက မစားလည်းရတယ်။ C-Box အောက်ဘက်ကို ဆက်ပြီး ဆင်းသွားရင် Label အောက်က list ထဲမှာ ရှိတဲ့ Nutiition ကို နှပ်လိုက်ပါ၊ အာအာရနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပို့စ် ၁၈ ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကျွန်မတင်ထားတဲ့ အစာအာဟာရ မမျှတခြင်း၊ ကျန်းမာစွာ အသက်ရှင်ရပ်တည်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစာအာဟာရ (၁) နှင့် (၂)၊ ကျန်းမာစွာ အသက်ရှင် ရပ်တပ်နိုင်ရန်အတွက် နေ့စဉ် စားသုံးရန် လိုအပ်သော အစာပမာဏ ဆိုပြီး ၄ ခုကို သွားဖတ်စေချင်ပါတယ်။ အာဟာရကို အန္တရယ်ကင်းကင်း ဘယ်လိုစားရမယ်၊ နေ့စဉ် ဘာအာဟာရတွေ လိုအပ်တယ်၊ ဘာစားစရာထဲမှာ ဘာဓါတ်တွေ ပါဝင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လို ပုံမှန်အလေးချိန် ဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုတာကအစ အကုန်လုံးပါပါတယ်။ ကိုအောင်ဝင်း မေးတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ ဆင်တူတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အဲဒီပို့စ်တွေအောက်မှာ ကျွန်မ ပြန်ဖြေထားတာတွေကိုပါ ဖြစ်အောင် ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
Aspirin and anticoagulants are contraindicated in patients who undergone brain surgery. Stroke patients who needed surgery had haemorrhagic stroke but embolic stroke. So aspirin is not needed.
I miss to type 'not' in front of embolic stroke. sorry for that
ဆရာ ဇိဝက- ဖြည့်စွက်ပြောပြပေးတဲ့အတွက် အထူး ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ရှင့်။ ကျွန်မရေးတဲ့ ပို့စ်က လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လ သုံးလခန့်က လေဖြတ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်း မကြာခဏ လာလာမေးနေတဲ့ စာဖတ် ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးထားတာ ဖြစ်လို့ သိပ်ပြီးယျေဘုယျ ဆန်တဲ့ အခြခံ အချက်အလက်ကိုသာ အကျဉ်းချုပ် ဖေါ်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတို့လို ပညာရှင်တွေအတွက်တော့ လေဖြတ်ခြင်း အမျိုးစား တခုစီရဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်အတွက် ဘယ်လိုမှ ပြည့်စုံလုံလောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Aspirin နဲ့မှ မဟုတ်ပါဘူး လေဖြတ်ခြင်းကို ဆေးနဲ့ ကုသလို့ မရနိုင်ပဲ လေဖြတ်ပြီးသူဟာ နောက်တကြိမ် ပြန်ဖြစ်ဖို့အလားလာ သိပ်ကို များတဲ့အတွက် ပြန်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်တဲ့နေရာမှာ အများဆုံးသုံးတဲ့ ဆေးတွေအဖြစ် ဥပမာပေးရင်း Aspirin ကို အမည်တပ်လိုက်တာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူနာတိုင်းကို Aspirin ကုရမယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ သွေးစစ်ပြီး သွေးထဲမှာပါဝင်တဲ့ အဖြေကိုမူတည်ပြီး ဘယ်ရောဂါ အမျိုးအစားကို ကာကွယ်ဖို့ ဘယ်လူနာကို ဘာဆေးပေးရမယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်တွေက Evidence based ကို အခြေခံပြီး ဆုံးဖြတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ ပြောတဲ့ (haemorrhagic) ကိုပဲ ခွဲစိတ်ရတာ ဖြစ်ပြီး (embolic stroke) ကိုတော့ ခွဲစိတ်စရာ မလိုဘူးဆိုတာ နောက်ပိုင်းတော့ ပြောမတတ်ဘူး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် မေလ Neuro-surgical ward ကို ကျွန်မ Clinical သွားရတဲ့ အချိန်ထိတော့ ခွဲစိတ်ပြီး သွေးကြောကို bypass ပြန်လုပ်ပြီး ပြုပြင်ထားတဲ့ လူနာတွေကို တွေ့ရသေးတယ်။ ကျွန်မသိရသလောက် Diagnosis ထဲက အဖြေကိုကြည့်ပြီး ပျက်စီးသွားတဲ့ သွေးကြောကို bypass ပြန်လုပ်လို့ အကျိုးထူးသေးတယ်လို့ ယူဆရင် ဘာအမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခွဲစိတ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မရေးတဲ့ ပို့စ်အများစုက ကိုယ်တိုင် Clinical အတွေ့အကြုံထက် Mid-line, Cochrane library စတဲ့ တက္ကသိုလ်က ပေးထားတဲ့ Database တွေထဲက Systemic literature review အချက်အလက်တွေ ပိုများလို့ Evidence based resources တွေသာ ဖြစ်ပြီး Primary resources တွေ မဟုတ်လို့ ပြည့်စုံမှု မရှိနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ဆရာတို့လို လူနာတွေနဲ့ အမြဲတမ်း တကယ်လက်တွေ့ လုပ်နေသူတွေဆီက မှတ်ချက်တွေ၊ အကြံပြုမှုတွေကို အလေးအနက် တန်ဖိုးထားပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း မှားနေတာ တွေ့လို့ဖြစ်စေ၊ မပြည့်စုံဘူးထင်လို့ ဖြစ်စေ မှတ်ချက်ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်လျက် ကြိုဆိုနေပါတယ်။